राजनीतिका चतुर खेलाडी ओलीको अर्को चलाखी बाहिरियो, ओली सरकार ढाल्नेहरु ठूलो तनावमा ! - Sampurnab Khabar
राजनीतिका चतुर खेलाडी ओलीको अर्को चलाखी बाहिरियो, ओली सरकार ढाल्नेहरु ठूलो तनावमा !
१० कार्तिक २०७८, बुधबार October 27, 2021 by सम्पूर्णव
काठमाडौं – राजनीतिका चतुर खेलाडीका रुपमा चिनिदै आएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अर्को चलाखी बाहिरिएको छ । उनले आफू नेतृत्वको सरकार ढाल्नेहरुलाई तनाव हुने कदम उठाएका हुन् ।
ओलीले परमादेश जारी गर्ने प्रधानन्यायाधीश मात्रै नभई न्यायाधीश सबैले राजीनामा दिनुपर्ने जोडदार माग गरेका हुन् । पार्टीको पालिका तहको अधिवेसनको संयुक्त उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ओलीले एकजनाले मात्र परमादेश जारी नगरेकाले पाँचै जनाले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका हुन् ।
उनले भने, ‘एकजना श्रीमानले मात्र परमादेश जारी गरेका थिएनन्, अहिले एकजनाको मात्र राजीनामा किन माग्ने ? पाँचै जना श्रीमानको राजीनामा आउनुपर्ने होइन र ?’
कुन पक्षले जित्यो र कुन पक्षले हार्यो भन्ने भन्दा पनि न्याय प्रणाली सन्तुलित रुपमा चल्यो चलेन भन्ने आफ्नो चिन्ता रहेको भन्दै उनले अदालत पुगेपछि न्याय पाउँछु भन्ने विश्वास हुनुपर्ने बताए ।
ओलीले न्यायालयमा विकृति मौलाएको औंल्याएका छन् । उनले भने, ‘यो न्यायाधीश हुँदैन, त्यो न्यायाधीश चाहिन्छ भन्नेदेखि बारले इजलास गठन गर्ने, अभिवक्ताले इजलास तोक्ने कुराको अभ्यास गलत हो ।’
अदालतमा जनतालाई मर्का परेका मुद्दाहरु थाँती रहेको भन्दै उनले राजनीतिको थलो बनाउने कुराहरु तदारुकताका साथ भइरहेको आरोप लगाए ।
ओलीले सर्वोच्चको परमादेशबाट देशमा अहिले दुर्गन्ध फैलिएको पनि बताए। ‘सर्वोच्चको परमादेशबाट अहिले सुगन्ध या दुर्गन्ध के फैलिएको हो म केही पनि भन्दिनँ’, उनले भने, ‘तर अहिले अदालतलाई तमासाको थलो बनाइएको छ। न्यायपालिकालाई त्यस्तो नबनाऊँ।’
ओलीले जेठ ८ मा दोस्रो पटक गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले पुनस्स्थापनाको फैसला सुनाएको थियो।
त्यसबेला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिएको थियो। परमादेश दिने संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई सदस्य थिए।अनलाईनमार्ग बाट
Prevपाइल्स भएर तनाबमा हुनुहुन्छ ? त्यसो भए खानुहोस करेला ! यस्ता छन् करेला खानुका अनगिन्ती फाइदा
Nextदुई प्र’हरीको ह’त्या गरेको अभि’यो’गमा प’क्रा’उ परेका ९ जनालाई जन्मकै’दको फै’सला